Waa Maxay Wax Gaar Ah Oo Ku Saabsan Warbaahinta Bulshada? | Martech Zone
Waa Maxay Wax Gaar Ah Oo Ku Saabsan Warbaahinta Bulshada?
Saturday, April 2, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Toddobaadkii hore, waxaan xusay mid ka mid ah sababaha baraha bulshada ayaa fashilmay dad badan oo suuqley ah ayaa sabab u ahaa sababtoo ah ma aanan aqoonsan algorithm-ka sixirka. Weli uma maleynayo inay jirto algorithm sixir… laakiin usbuucaan kadib, waxaan tilmaami karaa mid ka mid ah astaamaha gaarka ah ee warbaahinta bulshada. Waa nuglaanta.
Qaybta xigta waa nooc shaqsiyadeed… marka haddii aad dareento inay xoogaa yar tahay, ka dib u bood qaybta ku xigta!
Ku Saabsan Aabahay
Bishan waxay ahayd mid adag. Dhowr toddobaad ka hor, waxaan aasay saaxiibkaygii wanaagsanaa ee dugsiga sare. Shalayna, waxaan aasinay odayga reerka iyo ninka laygu magacaabay, awoowgay, Douglas Morley. Waan ogahay in dad badani ay leeyihiin awooweyaal aan fiicnayn… laakiin awowgay wuxuu ahaa qof gaar ah. Wuxuu ka mid noqday Ciidankii Boqortooyada Kanada wuxuuna ka soo shaqeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay walxaha qarxa, waxaa loo xilsaaray oo howlgab ka noqday darajada Kabtan. Waqti aan caan ahayn, wuxuu doortay inuu guursado gabadh Yuhuudi ah oo qurux badan - Ayeeyaday, Sylvia.
Ayeeyaday waxay ahayd haweeney gaar ah oo xoog badan sidoo kale. Ilaa dhimashadeedii 2003, waxay ahayd aamusnaanta aamusnaanta qoyska. Intii awowgay u adeegi jiray Yurub oo dhan, ayeeyday waxay kobcisay shirkad guuleysata - oo aan hore loo maqal xilligaas. Awoowgay wuxuu caabuday ayeeyday…. mana dhahayo fudeyd. Markii awowgay uu waayey xaaskiisa ka dib 58 sano oo uu guursaday qurux badan, taas ayuu qoray baalasha ka caawisay inuu duulo noloshiisa oo dhan ayaa la jaray. Ma hubo in aan waligay goob joog u ahaa nin si bilaa shuruud ah, aan daacadnimo ugu jirin xaaskiisa.
Maaddaama caafimaadkeedu fashilmay, fursad kasta oo aan ku sugi lahaa ayeeyday waxaa ku booday awoowe. Weligiis kama waaban - xitaa dhibaatooyinkiisa dhabarka iyo arrimaha caafimaadka. Markay arrimuhu si adag u adkaadeen, wuxuu geliyay cisbitaal. Maalmo ka dib, isagu ma uusan jeclayn sida loo daryeelo oo qol ayuu uga furay guriga. Wuxuu ag joogay sariirteeda habeen iyo maalinba. Wuxuu lahaa dad u soo galay si ay u sameeyaan ciddiyaha iyo timaheeda, sidoo kale. Waxay ahayd wax aan yareyn oo la yaab leh.
Aaska, waxaan kula kulmay dad badan oo awowgay taabtay. Sida ninkii beerta ka shaqaynayay ee aan ku hadlin Ingiriisiga oo daryeeli jiray guriga awowgay. Marnaba ma ogeyn in awowgay maalgeliyey meheradda ninka. Waxaan la kulmay daryeelahiisa, haweeney afrikaan Mareykan ah oo ku ooyday naxashkiisa oo ii sheegtay inaysan waligeed dareemin qof kale inuu jecelyahay Waxaan la kulmay macallinkiisii ​​Rabbi, oo uu sii waday inuu wax la barto ka dib markii ay ayeeyaday dhaaftay (in kasta oo uu weli Protestant ahaa). Waxaa jiray dadyow ka kala yimid adduunka oo dhan oo yimid ama tacsi u diray. Nimankii wastaadyada ahaa way yimaadeen oo waxay qabteen xafladoodii sagootin walaal. Xubin ka tirsan Legion-ka Mareykanka ayaa yimid oo maamuusay halyeey kale oo ka lumay jiilkii ugu weynaa.
Awowgay waxaa lagu aasay labiskiisa labiska… mar walbana kaftanka, waxaa sidoo kale lagu aasay albaabka furaha albaabka uu dalbado haddii uu soo tooso (wuxuu u sheegay in uu awow u yahay inuu taleefan u xirayo si aan kala sooc lahayn u kaco markii Hooyo ayaa soo booqatay qabuuraha!). Ka dib markii boorsadiyuhu ciyaareen Ilaahay Boqoradda badbaadi iyo Post DambeP Baakadaha ayaa lagu shiday si aan caadi aheyn Hawada Nagila. Dhammaanteen waan faraxnay oo qosolnay, kulligeen waan ilmaynay… kulligeenna waan dhoolla caddaynay oo waxaan sagootinnay nin aan innaba caadi ahayn.
Ma hubo in qofna uu maamuus noocan oo kale ah oo la yaab leh la siiyay. Waxaa muhiim ah in la ogaado in hooyaday, oo si aan daacadnimo ku jirin u daryeesho habeen iyo maalinba sannadihii ugu dambeeyay, waxay qorshaysay carwadan aan caadiga ahayn.
Ku soo noqo warbaahinta bulshada
Markii aan qoray in awowgay soo mariyey Facebook, boqolaal qof ayaa waqti u qaatay inay faallo ka bixiyaan. Waxaan helay daadad emayl, farriimo qoraal ah, fariimo qoraal ah, wicitaanno taleefanno ah iyo qoraalo shaqsiyadeed. Waxbadan kamaqeyb galin tan iyo waagaas family qoysku waa furaha hada iyo taageerida Hooyadey (canug kaliya ah) ayaa ah diiradeyda diiradeyda. Macaamiishayda, asxaabteyda, iyo kuwa i raacsanba dhamaantood si weyn ayey ii taageerayeen Waqtiga laga baxo ka ahaansho bulsho. Erayadu ma cabirayaan sida layga fogeeyey adiga dadweynow. Mahadsanid.
Kama qorayo mid ka mid ah tan damqasho ama naxariis hy Waxaan kaliya rabay inaan dabagal ku sameeyo markii aan kari karo oo aan idinla wadaago dadyow sababta aan u aamusay. Waxaan aaminsanahay in awoowe noloshiisa ay u baahan tahay in lala wadaago oo la xuso, oo aan la barooran.
Sidoo kale, waxay iga dhigtay inaan fahmo waxa laga yaabo inay khaas ku yihiin baraha bulshada. Had iyo jeer waxaan ku qaatay waqti qallafsan erayga hawlgelinta… Waxay bilaabeysaa inay dhawaqdo horay loo qorsheeyay lana soo saaray. Cadaadiska la mid maaha hawlgelinta. Ka-hawlgalku wuxuu ka dhex dhacayaa laba dhinac oo doonaya - nuglaanta ayaa dhacda marka dhinac uun si fudud isu furo kan kale. U nuglaanta ayaa sidoo kale kuu furi karta quudhsasho, jees jees iyo dhaleecayn suurtagal ah. Laakiin ka sii muhiimsan, u nuglaanta ayaa kuu fureysa inaad ku xirnaato heer aad la leedahay dhagaystayaashaada oo aysan jirin wadiiqo kale oo isgaarsiineed oo lagu bixin karo. Ahaanshaha nugul looma qori karo qoraal suuqgeyn ah.
Taasi waa waxa gaarka u ah baraha bulshada.
Apr 2, 2011 at 9: 00 AM
Tacsi tiiraanyo leh ole saaxiib. Awoowgaa wuxuu u egyahay nin layaab leh. Waxaan jeclaan lahaa inaan yeesho mudnaanta inaan la kulmo. Nasiib ayaad u yeelatay inaad ogaato ayeeyadiina. Miinadaydu waxay dhimatay anigoo aad u yar oo aan xasuusto. Sidaas xusuusnow xusuusta.
Apr 2, 2011 at 2: 55 PM
Mahadsanid BB! Wuxuu ahaa nin weyn oo wadani Canadian ah!
Apr 2, 2011 at 9: 42 AM
Waxaan ku jiray suuq geynta 30 sano. Warbaahinta bulshada waxay shaqeysaa oo keliya marka ay jirto hawlgal toos ah iyo isgaarsiin dhab ah. Waxaan u arkaa wax lagu qoslo in badanaa loola dhaqmo sidii rasaas sixir ah. Ka-hawlgal la'aan iyo xiriir dhab ah waa jimicsi aan waxba tarayn. Tirada kuwa raacsan ayaa ah kuwa labaad tayada waxqabadkaas.